Madaxweyne Xaaf: “Mushkilad aan ka ahayn tan laga soo maleegay Villa Somalia ma hayso Galmudug” (war saxaafadeed) – Radio Daljir
Seteembar 23, 2018 3:45 g 0
War Saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ku tilmaamay caasumaadii Madaxweyne Farmaajo “mid aanu ka aragnay baraha bulshada,” oo aysan jirin casumaad rasmi oo Madaxweyne Farmaajo uu u fidiyey maamulka Galmudug.
Madaxweyne Xaaf ayaa ku gacan seyray baaqa Madaxweyne Farmaajo ee ahaa in Madaxda Maamul goboleedka Galmudug ay isugu yimaadaan shir degdeg ah 24-ka bishan, kana dhici doona Madaxtooyada Soomaaliya.
Waa baaqii labaad ee Madaxweyne Farmaajo oo illaa iyo biloowgii khilaafka DFS iyo maamul goboleedyada aan dheg jalaq loo siin.
Warsaxafadeedka soo baxay Xafiiska Madaxweyne Xaaf ayaa lagu sheegay in aanay jirin Madax Galmudug oo is khilaafsan, mushkiladaha ka jira Galmudug ee siyaasadeedna ay yihiin kuwo laga soo abuubulay Madaxtooyada Soomaaliya.
“Galmudug uma baahna xalkeedu in Muqdishu la isugu yimaado ee waxay u baahantahay in faragelinta laga daayo lagana saaro dadka dheeriga ku ah, qalalaasaha iyo abaabuladana ka wada deegaanada qaar ee Galmudug,” ayaa lagu sheegay war saxaafadeedka Madaxweyne Xaaf.
HALKAN riix oo ka akhri wr saxaafadeedka oo dhammaystiran.
Puntland oo eedeyntii wasiir hore Cali Cabdulaahi jawaab kulul ka bixisay (dhegayso)